Taliska booliska gobolka Mudug oo sheegay inay meel wanaagsan marayso qorshihii lagu soo dayn lahaa dad laga afduubtay Gaalkacyo. – Radio Daljir
Taliska booliska gobolka Mudug oo sheegay inay meel wanaagsan marayso qorshihii lagu soo dayn lahaa dad laga afduubtay Gaalkacyo.
Nofeembar 21, 2012 5:49 b 0
Gaalkacyo, Nov 21- Taliyaha qaybta booliska Mudug G/sarre Jaamac Maxamed Axmed (Sandaqad) oo maanta waraysi siiyay radio daljir ayaa ka hadlay dhacdadii dhawaan lagu afduubtay dad rakaab ahaa oo ka soo jeeda PL oo wali ku jira gacanta maleeshiyaadkii afduubtay.
Taliyaha ayaa ugu horayn dhacdooyinkii ammaan darro ee is-xigxigay waxaa uu ku tilmaamay duulaan qorshaysan oo ay ka danbeeyaan kooxo argagixisaa taasoo uu ku micneeyay inay ka dagaalamayaan madax looga qabtay gobolka, taliyiyuhu waxaa uu dhanka kale carabaabay inay xiriir kala sameeyeen maamulka Galmudug dadka lagu haysto koonfurta Gaalkacyo isagoo rajjo ka muujiyay in sida ugu dhakhsiyaha badan xoriyadooda dib loogu soo siin doono.
G/sarre Sandaqad ayaa tilmaamay inay yeelan doonaan shirar iyo kulamo lagaga arinsanay afduubyada iyo falalka ammaan darro ee noocaan oo kalaa, waxaa uu hoosta ka xariiqay inay si wada jir ah isaga qabtaan kooxaha iyo shakhsiyaadka doonaya inay gobolka ka dhaliyaan khal-khal amni.
Taliyuhu waxaa uu dhanka kale tilmaamay in dadka ay ka soo jeedaan dhibanayaasha afduuban aysan jirin wax dareen murugaa oo ay qabaan isla markaana niyad wanaag ay ka qabaan inay dib u heli doonaan eheladooda ka maqan, sidoo kalana aysan jiri doonaan tallaabo fal-celisa oo loo maro dhan aan wanaagsanayn shacabka reer Puntlandna aysana gaysan doonin wax afduuba.
Sanadaqad ayaa ka digay in la isku dhufto shacabka labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug, la iskana ilaaliyo wax walboo keeni kara isku dhac lagana wada shaqeeyo wada noolaansho iyo daris-wanaag.
Hadalka taliyaha qaybta booliska PL G/sarre Jaamac Sandaqad ayaa ku soo aadaya xili wali gacanta maleeshiyaad ka soo jeeda koonfurta Gaalkacyo ay ugu jiraan dhawr qof oo laga afduubty inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Galdogob, maamulk iyo bulshada Galmudugna ay ku adkaysanayso in mid ka mida labo nin oo dhawaan qaraxyo lagu qabtay uu ahaa ganacsade reer Galmuduga oo ceeb ka saliim ka ah waxyaabaha lagu eedeeyay ee lagu qabtay.
Gobolka waxaa hada ka socda kulamo ku aadan sidii dib xoriyadooda ay ugu heli lahaayeen dhibanayaasha wali gacanta ugu jira kooxihii afduubtay.